Nepali Christian Bible Study Resources - परमेश्वरको इच्छा कसरी जान्न सकिन्छ?
» अध्ययन मालाहरू » एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम » परमेश्वरको इच्छा कसरी जान्न सकिन्छ? - रोमी १२
यो एक उचित निर्णय हो। यो उचित हो किनभने परमेश्वरलाई चिन्नु र उहाँको सेवा गर्नु जीवनकै उद्देश्य हो (उपदेशक १२:१३)। यो उचित हो किनभने परमेश्वरको इच्छाबाट अलग भएर बिताइने जीवन व्यर्थ हो। उपदेशकको पुस्तकको मुख्य विषय यही हो। यदि म आफ्‍नो जीवन परमेश्वरको सेवाको निम्ति भन्दा अरू कुरा गर्न प्रयोग गर्छु भने मैले यो जीवन व्यर्थैमा फालिरहेको हुन्छु। साथै ख्रीष्टमा मेरो जीवन समर्पण गर्न एकदमै उचित छ किनभने यसले ठूलो इनाम ल्याउँदछ (हिब्रू ११:२४-२७)। पछिबाट शहीद बनेका एकजना मिसनरीले भने, "त्यो मूर्ख होइन जसले गुमाउन नसकिने कुरालाई प्राप्‍त गर्न जोगाउन नसकिने कुरालाई सुम्पिदिन्छ"।
यो एक व्यक्तिगत निर्णय हो। युवाहरू धेरै पटक आफ्‍ना साथीहरूले के सोचिरहेका छन् वा के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा एकदमै चासो राख्छन्। उनीहरू "समक्षकीहरूको दबाब" प्रति संवेदनशील बन्ने गर्छन्, तर म परमेश्वरको इच्छा जान्न चाहन्छु भने म त्यसभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र ‍परमेश्वरलाई मात्र खुशी पार्नलाई ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्छ।
"संसारसित एकनासे नहोओ" भन्ने आज्ञाले हामी स्वभावैले कमजोर छौं अनि संसारद्वारा हामी सजिलै ढालिन सक्छौं भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दैछ। संसार आफ्‍नो दृष्टिकोणको प्रचार-प्रसार गर्नमा जोशिलो छ। संसार चुप लागेर बस्दैन र त्यो आफ्‍नै सुरमा हिँड्न सन्तुष्ट छैन। संसारले विश्वासीलाई आफ्‍नो विचारधारा र जीवन शैलीमा ढाल्न खोज्छ। रक सङ्गीतकार कोर्टनी लवले भनेकी छन्,"म आफ्‍नो विचारधारालाई समाज-संस्कृतिमाथि लाद्‍न चाहन्छु" (स्पीन पत्रिका, Oct.1988, p.100)।
आत्मिक बदली पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा आउँछ। हामीले आफूलाई पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा सुम्पनुपर्छ, उहाँलाई नै हाम्रो गाडीरूपी जीवनको चालक हुन दिनुपर्छ। "आत्माले भरिनु" भनेको यही हो। हेर्नोस् गलाती ५:१६-१७; एफेसी ४:३०,५:१८।
रोमी १२ ले परमेश्वरको इच्छा जान्नलाई मण्डली अनिवार्य छ भन्ने कुरा हामीलाई सम्झना गराउँछ। पावलले ४ पदमा "शरीर" लाई उल्लेख गर्दछन्। यसले मण्डलीलाई जनाउँछ। मण्डली सत्यको खाँबो र जग हो र परमेश्वरको घर हो (१ तिमोथी ३:१५)। चेला बनाउन र तालिम दिनलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको संस्था मण्डली हो। मण्डली आत्मिक सुरक्षाको ठाउँ हो। मण्डली विश्वव्यापी सुसमाचार प्रचारको केन्द्रिय कार्यालय हो। प्रथम मिसनरीहरू मण्डलीबाटै पठाइएका थिए (प्रेरित १३:१-४)।
« आधारात्मक बाइबल शब्दावली भाग ४
जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग १) »